သင်ဟာ ဗမာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သင်ဟာ ဗမာ
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Jan 26, 2012 in Creative Writing, Think Different | 17 comments
သင်ဟာ ဗမာ၊ ဘယ်နေရာမှာ
မခံစားနိုင်သော ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အသံ…ကျွန်တော့် နားနဲ့ကြားလိုက်ရတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်များ တိုးတက်ဖို့အရေးပါနေပါလိမ့်…
“ဒီအကြောင်းကို နိုင်ငံခြားသားကဆုံးဖြတ်ဦးတောင် ဗမာဖြစ်တဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကရော ထောက်ခံတာပဲလား”
တအံ့တသြ မေးလိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အသံ…ကျွန်တော့် နားနဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်..
မြန်မာနိုင်ငံက ၀န်ထမ်းတွေများ ငယ်စဉ်ကတည်းက သင်ပေးလိုက်သလို မရိုကျိုးတော့ပါလား…
“ ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်…သူက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လစာထောင်ကျော်ရနေလို့ နိုင်ငံခြားသားခိုင်းသမျှ မျက်စိမှိတ်လုပ်တာ အခုမှ မဟုတ်တာ…ကြာပေါ့”
မထူးဆန်းသလို ပြောလိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အသံ…ကျွန်တော့် နားနဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်..
ဒါဟာ ဖြစ်လေဖြစ်လရှိတဲ့ တွေ့နေမြင်နေကြအရာတွေပဲလား…
“ဒါတော့ဘယ်မရလဲ သူကျေနပ်လို့ ဖိနပ်ပဲတိုက်တိုက် ထမင်းပဲသွားချက်ချက်၊ ငါတို့ကတော့ အ၀တ်လိုက် မလျှော်နိုင်ပါဘူး”
မခံမရင်နိုင်ပြောလိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အသံ…ကျွန်တော့် နားနဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်..
သူတို့ ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာတုန်း…အရင်တုန်းက လစာလေးပုံမှန်ရနေရင်ကျေနပ်တဲ့သူတွေ…
တကယ်တော့ အဲဒီလိုစကားတွေကိုကြားခဲ့ရတာ တစ်လကျော်သွားခဲ့ပြီ…
၀န်ထမ်းတွေ ရင်ထဲက မျက်ရည်တွေကျနေတာ တစ်လကျော်သွားခဲ့ပြီ…
အဲဒီလိုပဲ ၀န်ထမ်းတွေစကားကို သူတို့ နားမထောင်ခဲ့တာလဲ တစ်လကျော်သွားခဲ့ပြီ…
အရင်တုန်းက ကိုယ့်အလုပ်လေးလုပ်ပြီး…လစာလေးကို မထိခိုက်အောင် ချွေတာခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ
အခုတော့ စိတ်မပါပဲ အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်…
သူတို့ အလုပ်ထဲမှာ သံယောဇဉ်မရှိတော့ဘူး… သူတို့ အလုပ်အပေါ်မှာ တွယ်တာမှုကင်းသွားကြပြီ…
သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေ အလုပ်မှာ လေးတွဲ့တွဲ့လှုပ်ရှားနေပေမယ့်… သူတို့ဝိညာဉ်တွေ၊ သူတို့စိတ်တွေ..
ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၂ နှစ်စပိုင်း
ရေးထားတဲ့ အယူအဆ ကို ကြိုက်တယ်ဗျို့ ……
၀တုတ် ကြောင် ကလေးရေ
သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝ ဆိုတာ ……
ရေးသားတဲ့ ပုံစံ ကြိုက်တယ် ။
အဲဒီလိုခံယူထားတဲ.လူ။ခင်ချင်တယ် ပင်ကိုယ်လည်းစကားနည်းလို. ……………
ရုံးပိတ်ရက် ဆိုတာ ဘယ် ရုံး ဌာန ကုမ္ပဏီ မှာမဆို အစိုးရ က တရားဝင် သတ်မှတ် တဲ့ နေ့တွေကို ပိတ်ရတာ မဟုတ်လား။ အစိုးရ ပိတ်ရက် ကို ဆင်းခိုင်း တာဆိုရင် ခိုင်းသူ အလွန်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒါကို မကျေနပ်တာနဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကို တော့ စိတ်မပါဘဲ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်တာပါဘဲ။
ကိုယ့်အလုပ် တာဝန်ကျေ အောင် တော့လုပ်ရပါမယ်။
မတရားဘူး ဆိုရင် အဲတာကို ရဲရဲတင်းတင်း နဲ့ ပြောဆို ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အဲဒီ နိုင်ငံခြားသား ကို ရှင်းပြဖို့ အဲဒီ HR ကလူကို ဘဲ အားမကိုးဘဲတစ်ခြား ပြောနိုင်သူ မရှိဘူးလား။
အဲဒီ တရားဝင်ပိတ်ရက်တွေ မှာ အလုပ်ဆင်းခိုင်းရင် အပိုကြေး ပေးရပါမယ်။
ဒါကို မြန်မာပြည် ရဲ့ အလုပ်သမား ဥပဒေ မှာ သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်မှာပါဘဲ။
ဒီကိစ္စမှာလဲ စောစောက သေနတ်ကိစ္စလိုဘဲ ခေါင်မလုံတာမို့ အားလုံး ဟာ ဥပဒေဘောင်လွတ် တွေချည်း များနေတာပါဘဲ။
တကယ်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသား ဆိုတာ ဥပဒေ ကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘက်မှာ ခိုင်မာပြီး အားကိုးလောက် တဲ့ ဥပဒေတွေ ရယ်၊ အဲဒါကို မှန်ကန်စွာ စောင့်ကြည့် နေပြီး ပြည်သူလူထု ဖက်က တကယ်ရပ်မဲ့ လူတွေ ရယ် တကဲ့ကို လိုနေပါပြီ။
သို့ပေမဲ့ လည်း ပြည်သူတွေ ကလဲ ပြင်သင့်တဲ့စိတ်တွေ ပြင်ရပါ့မယ်။
ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည်ဖြင့်
မဆက်ချင်တော့ပါဘူးဗျာ ပြောကြည့်တာပါ စိတ်မဆိုးနဲ့နော့…..
http://www.mol.gov.mm/en/ မှာလဲဝင်ပီးကွန်ပလိမ်း လုပ်လို့ရပါကြောင်း…
ကျွနုပ် သည်လည်း ရခိုင်လူမျိုး ဖြစ်ပေတော့သည်
အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ရမည် ။
ကျွန်တော် ဗမာလို့မသုံးခင်မှာ အများကြီးစဉ်းစားပါတယ်…
အထူးသဖြင့် မြန်မာလို့ ကျွန်တော်တို့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ အသံမထွက်ဘူးဆိုတာ သတိထားမိတယ်…
နောက်တစ်ချက်က ဗမာဆိုတဲ့အသံထွက်နဲ့၊ ဗမာဆိုတဲ့အရေးအသားကို ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက သုံးခဲ့တာကိုလဲ သတိပြုမိခဲ့တယ်…
ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက သုံးခဲ့တဲ့ ဗမာဆိုတာ နိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးပါပြီးသားလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ…
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော့ ဖီလင်ပါ..
မြန်မာလို့ခေါ်တာတာထက်၊ ဗမာလို့ခေါ်ရတာက ပိုပြီးတော့ အင်အားရှိတယ်၊ ပိုပြီးတော့ မာန်ရှိတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
အခုအချိန်အထိ အင်္ဂလိပ်လိုသုံးရင်တောင် Burma လို့ ကျွန်တော်သုံးနေတုန်းပဲ…
တခါတစ်လေ တော်တော်လေးသတိထားပြီး မပြောမိအောင် ဆင်ချင်နေရတုန်းပဲ…
ဟာ ဟိုမှ ဗမာက ကောင်ကွ… မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေမှ (နိုင်ငံခြားရောက် ဗမာတစ်ယောက်)
အစ်ကို့ သဘောထားစေတနာကို သိပါပြီဗျာ
အစ်ကိုပြောတာလည်း မှန်ပါတယ် အမှန်က
နှုတ်စီးလို့ ခေါ်လို့ကောင်းလို့ ဗမာလို့ ခေါ်တယ်ဆိုလည်း
သဘောထားအမှန်သာ အဓိကမို့ ………အိုကေပါတယ်ဗျ…..
ရုံးတွင်းပြသနာကို ရုံးပြင်မထုတ်ချင်လို့ ရုံးတွင်းဖြေရှင်းနည်းတွေဟာလဲ ကုန်ခဲ့ပါပြီ…
အရာရှိတွေဆိုတာ သူတို့ထုတ်ပြီးသား အမိန့်ကို ပြန်မရုတ်သိမ်းချင်လို့ ခေါင်းမာနေကြတာဆိုတော့…
အခုထက်အထိ စဉ်းစားနေကြရတုန်းပဲ ဆိုပါစို့
အဟီး .. ဂျီတော့ကာစတန်မက်စေ့ခ်ျမှာရေ .. ဂေဇက်မှာပါ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ … တကယ်ဆို ပါ့ဘလစ်ဟောလိဒေးတွေမှာ(နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်တွေမှာ) မဖြစ်မနေ ရုံးပိတ်ပေးရပါမယ် … ။ ဘယ်သူကမှ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ရုံးအတင်းတက်ခိုင်းလို့ မရပါဘူး … ။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ … ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုခုအတွက် ရုံးဖွင့်တယ်ဆိုလျှင်အောင် .. လုပ်အားခ ၊ အချိန်ပိုကြေးတွေရဲ့ နှစ်ဆကို ပေးရပါတယ်တဲ့ …. ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်တုန်းကလည်း ..မျက်နှာလိုချင်တဲ့ဖော်လံဖားတွေကြောင့် ကျွန်မတို့ ရုံးပိတ်ရက် အပြည့်ဝမရခဲ့ဘူး .. ဒီနှစ်တော့ လုံးဝပဲ … ကရိန်းနဲ့ဂုတ်လာဆွဲတာတောင် … ရုံးမတက်ဘူးမှတ် … ။
တကယ်ဆို ကိုယ်မသွားလျှင် ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး …. ။ ငကျွတ်တွေ ၊ ဖော်လံဖားတွေသိပ်အလုပ်တတ်ချင်နေလို့ ဒီလို ကိစ္စတွေဖြစ်ရတာ … ။ နားချိန်မှာ အပြတ်နားပစ်သင့်တာ … ပိုက်ဆံထက် .. အားလပ်ချိန် ၊ မိသားစုကိုပေးရမယ့် အချိန်တွေက ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ …. သူတို့နားလည်သင့်တယ် …
ပေါက်ကွဲမိတဲ့ အဓိကအချက်က ရုံးမပိတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး…
ရုံးမှာနေရင် အင်တာနက်အလကားရတယ်…အဲယားကွန်းနဲ့ အေးဆေးနေရတယ်…
ကော်ဖီအလကားသောက်လို့ရတယ်…မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အကြောင်းတစ်ခုခုပြ ကားယူပြီး အပြင်သွားလို့ပါရသေးတယ်…
အဓိက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အချက်က…၀န်ထမ်းတွေအပေါ်မညှာတာတဲ့လူက ကိုယ့်ဗမာဖြစ်နေတာကိုပဲ
ရေပက်တဲ့ ရက်ပဲပိတ်မှာပါတဲ့ နှစ်တိုင်းဒီလိုချည်းပဲ
ကျနော်ကလဲလိုက်နာမိပါတယ် အကြိုနေ့မတိုင်ခင် ၁ရက်အထိရုံးတက်ပေးပီး
နှစ်ဆန်း၂ရက်နေ့မှပြန်တက်တယ် မြန်မာအချင်းချင်းပဲနော် လူမျိူးတော့မတူဘူး ပေါ့